के छापिए विहीवार वुटवलका पत्रपत्रीकामा ?-Nagarikaawaj.com
के छापिए विहीवार वुटवलका पत्रपत्रीकामा ?
बिहिबार, अशोज २४, २०७०
बुटवल असोज २३ – नमस्कार । आज मिती २०७० साल असोज महिनाको २४ गते विहीवार । मोफशलको राजधानि मानिने वुटवल र आसपासका क्षेत्रमा छापिने पत्रपत्रीकामा आज विशेष प्राथमिकताका साथ बुटवल क्षेत्र नम्वर ४ वाट उमेद्धारी दिनुभएका पुर्व प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईको समाचारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ छापेका छन । नेपाली राष्ट्रिय दैनिक ‘दैनिकपत्र’ ले आफ्नो मुख्य पृष्ठ पहिलो समाचार लुम्विनीवाट देशकै आर्थिक परिवर्तन शिर्षकमा भट्टराईको समाचार छापेको छ ।
दैनिकपत्रले संविधानसभा निर्वाचनमा यथास्थितीवादी र अग्रगामी शक्तीविच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने वताउनुभएको आफ्नो समाचारमा जनाएको छ । त्यस्तै दैनिकपत्रले दशैको पाहुर वोकेको ट्याक्टर दुर्घटना, दशै र वक्राईदले खसीको मुल्य आकासियो शिर्षकको समाचारपनि पहिलो पृष्ठमै छापेको छ । यस वाहेक नागरिक आवाज डट कमको औपचारीक उद्धघाटन शिर्षकको समाचार, अदालतको आदेश विपरित तानसेनको फोहोर पुुरानै ठाउँमा डम्पिङ, दलित र गैरदलितका संयुक्त पुजारी लगाएतका समाचार पनि भित्री पृष्ठमा छापेको छ । अन्नपुर्ण दैनिकले भष्ट्राचारमा जेल बसेकालाई भवय स्वागत र असई र जवानले फिर्ता गरे भेटिएको पैसा विषयको समाचारलाई दाजेर निकैनै प्रभावकारी ढगंवा पहिलो समाचार वनाएर छापेको छ ।
काग्रेस नेता खुमवहादुर खड्का भष्ट्राचार कसुरमा १४ महिना जेल सजाए भोगेर निस्कदै गर्दा सयौको सख्याँमा उपस्थित कार्यकर्ताको स्वागत विषयक समाचारलाई अन्नपुर्णले छापेको हो । यस्तैगरि ध्वसं गर्नेलाई सरकारी सुरक्षा विषयको समाचार पनि अन्नपुर्णले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ ।
यस्तै जसघंर्ष साप्ताहिकको पहिलो पृष्ठमा रामजी ज्ञवालीको दशै विशेष समाचार छापेको छ भने करुवा अर्धसाप्ताहिकले पनि दशै विषयको समाचार आफ्नो पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । त्यस्तै यहाँका तिलोत्तमा दैनिक, मेचिकाली, सैनामैना लगाएतका पत्रपत्रीकाहरुले पनि विहीवार क्षेत्र नम्वर ४ वाट उमेद्धारी दिनुभएको समाचारलाई निकैनै प्राथमिकताका साथ छापेका छन । यद्यपी केही दिन लगातार एमाओवादी गोर्खा फर्क भनेर स्तभ्व लेख्नेहरुले भने आज लेखेका छैनन । एमाले निकटका ति पत्रकारले यहाँका एक दैनिकमा कहिले कुन नामवाट त कहिले कुननामवाट जनतामा नकारात्मक सदेश दिने खालको भट्टराईको विषयमा कहिले लेख त कहिले समाचार छापिरहेका थिए ।
पत्रपत्रीकामा आज बाट अन्य समाचार
सिके राउत राष्ट्रिय सभा सांसद बन्ने !
बोक्सीको आरोपमा राजधानीमै तातो पन्युँले डामियो
उत्कृष्ट पुरस्कृत कर्मचारी ६० हजार घूससहित पक्राउ